Warshadda Wajiga Wejiga | Soo-saareyaasha Beeraha Shiinaha, Soo-saareyaasha
Wejiyada wejiga waxay ku yimaadaan qaabab kala duwan, laakiin dhammaantood waxay bixiyaan caag caag ah oo daboolaya wajiga. Difaaca ugu habboon, gaashaankuna waa inuu ka hooseeyaa garka gadaashiisa, dhegaha gadaashiisa, waana inaysan jirin faraq u dhexeeya futada iyo madaxa madaxa gaasha. Difaaca wejiga uma baahna waxyaabo gaar ah oo loogu talagalay soo-saarka iyo khadadka wax soo saarka si dhakhso leh loogu soo celin karaa. Difaaca wejiga ayaa bixiya faa'iidooyin badan. In kasta oo maaskaro caafimaad ay leeyihiin cimri dherer iyo awood yar ...